Siyaasadda Soo Celinta | Farmashiyaha RXS
Laga bilaabo Maarso 1, dhammaan PPE, jeermis-dileyaasha, iyo waxsoosaarka la xiriira Corona Virus-ka lama soo celin karo ama looma soo celin karo shuruudahayaga adeegga. Amaradan lama tirtiri karo soo saarayaasha dalab badan awgood.
Soo celinta waxay ku xiran tahay aqbalitaankeena iyo ogolaanshaheena. Haddii shey aad heshay uusan ahayn shaygii aad amartay, waxyeelo soo gaadhay, ama aan dhammaystirnayn (qaybo maqan), ama cilad ku timid ciladaha soo-saarista fadlan ogeysii inay tahay 7 maalmood gudahood taleefan, fakis, ama emayl si aad u codsato beddelaad ama lacag celin. Haddii aad na soo wargeliso 7 maalmood kadib waxaan aqbali karnaa soo noqoshada laakiin waxaa lagaa qaadayaa lacag dhan 25% dib u soo celin. Haddii aad rabto inaad soo celiso shay maxaa yeelay hadda looma baahna ama lama doonayo fadlan nala soo xiriir 7 maalmood gudahood oo ku xirnaanshaha aqbalitaankeenna, waxaan soo saari doonnaa Ruqsad Ganacsi oo Soo Noqosho ah, waxaana laguu soo celin doonaa lacag laga jaray 25%. Lacagta rarka lama soo celin karo.
Khaladaadka fulin ee aan sameyno taas oo keeneysa rarka alaab / shey aan sax ahayn adiga ayaa sidoo kale la aqbali doonaa soo celinta 14 maalmood laga bilaabo taariikhda iibsiga.
Alaabada waa in lagu soo celiyaa sidii ay ku yimaadeen iyo baakidhkoodii asalka ahaa. Kahor soo noqoshada, waa inaad marka hore heshaa lambarka Ogolaanshaha Badeecada Soo noqoshada muddada celinta ee kor ku xusan. Lacag dib u habeyn ah 25% ayaa lagu dabaqi doonaa dhammaan soo celinta aan khaladaadka lahayn ama fulin la'aanta ah.
Fadlan waxaa lagugula talinayaa haddii aad ogaato khalad kahor intaadan helin shay la iibsaday ama la helo markii aad go'aamiso shey la dalbaday inuu khaldan yahay ama uusan ahayn waxa aad dooneysay fadlan si toos ah noogu soo wargeli sida ugu dhaqsaha badan. Ha u diidin keenista alaabta guriga shay aan sax ahayn ama aad maskaxdaada ka beddeshay ka hor inta aanad nala soo xiriirin marka hore si aan u diyaarinno soo-celinta nabdoon ee liistada. Haddii amar aad si sharci ah ku dhigto la diido waqtiga la keenayo waxaa lagaa doonayaa inaad bixiso wadarta kharashka dhoofinta si aad u keento una soo celiso xamuulka oo lagu daray lacag dhan 25% oo lacag celin ah.
Waxyaabaha qaarkood lama soo celin karo. Alaabada la soo saaray, waxyaabaha u baahan qaboojiyaha inta lagu jiro safarka, shey kasta oo u nugul dhiigga iyo / ama dheecaannada kale ee jirka ee faafin kara ama la is qaadsiin karo. Nala soo xiriir haddii aad qabtid wax su'aalo ah oo ku saabsan alaabooyinka gaarka ah.
Waxyaabaha qaarkood lama soo celin karo haddii la furo ama la isticmaalo. Shey kasta oo suuragal noqon kara infekshan ama faafo kadib isticmaalka kadib lama soo celin karo. Tusaale ahaan, waxyaabaha ay ka midka yihiin daryeelka nabarka, waxyaabaha maqaarka ka soo baxa, waraaqo kooban oo aan ceshan karin iyo gunta hoose, cirbadaha iyo cirbadeynta cirbadaha, garbaha qalliinka, galoofyada, cannulas, heerkulbeegyada, stethoscopes, iyo waxyaabaha la xiriira.